३ माघ २०७६
गोपालमान श्रेष्ठ, नेता, नेपाली कांग्रेस इमान्दारीका साथ सधैं शेरबहादुर देउवाको साथमा रहने कांग्रेस नेता हुन्, गोपालमान श्रेष्ठ । अहिले कांग्रेसमा भाँडभैलो छ, महाधिवेशनलाई लिएर । यसबीच, केही विभाग गठन भए । त्यसमा सबै गुट एक भएर देउवाविरुद्ध खनिएका छन् । यसमा देउवापक्षीय भनी चिनिएका प्रकाशमानलगायत नेता पनि छन् । तर, गोपालमान टसमस भएका छैनन् । ० शेरबहादुर देउवाको हठले कांग्रेस सकिने भयो भन्नेहरु बढेका… विस्तृत समाचार
२७ पौष २०७६
डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री÷संघीय परिषद् अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी विधिविपरीत संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई बहाना बनाएर सरकार छाडेको समाजवादीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई उक्त कदम ‘बहाना’ नभएर नीतिगत विषय भएको दाबी गर्दै छन् । उनको पार्टीले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा आफ्ना सिट गुमाउने गरी कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपरेको छ । विभिन्न पूर्वकम्युनिष्ट घटकको वर्चस्व रहेको समाजवादी पार्टीभित्र अरू थुप्रै नीतिगत र कार्यशैलीगत समस्या थाँती छन्… विस्तृत समाचार
११ पौष २०७६
पूर्णाकुमारी सुवेदी, पहिलो संविधानसभा उपाध्यक्ष अहिले प्रतिनिधिसभामा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदी पहिलो संविधानसभा (०६४–६९) मा उपाध्यक्ष थिइन् । ०४८ सालदेखि तत्कालीन नेकपा मसालमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता उनी ०५० मा महिला संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष भइन् । जनयुद्धकाल (०५७) मा बाँके जनसरकार प्रमुख भइन् । ०५८ को जुम्ला, खलंगाको फौजी कारबाहीमा सहभागी उनी रम्भापुर बर्दियामा सेनासँग भिड्नेमध्येकी हुन् । ० अहिले उपसभामुखलाई सभामुख… विस्तृत समाचार
४ पौष २०७६
- रिता कार्की, अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी संस्था रामेछाप बस्ने रिताका श्रीमान् अछामको मंगलसेनमा मारिए ०५८ सालमा । चारै वटा सुरक्षाकर्मी द्वन्द्वपीडितलाई भेला पारेर ०७० सालमा द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी संस्था स्थापना भयो । सो छातामुनि २९९५ शहीदका आफन्त गोलबन्द छन् । जसमध्ये सेनाका १०३१ वीरगति परिवार, प्रहरीबाट १५ सय र सशस्त्रका ४ सय हाराहारी छन् । सात हजार जति हिँँडडुल गर्न नसक्ने गरी अपांग भएकाहरु पनि यही संस्थाभित्र… विस्तृत समाचार
१४ मङ्सिर २०७६
गंगा यादव, पूर्वउपसभामुख तथा नेता नेकपा पूर्वउपसभामुख गंगाप्रसाद यादव विद्यार्थीकालदेखि नै पञ्चायती राजनीतिबाट दीक्षित भएका । ०१८ सालदेखि पिताजी मुनिलाल लामो समय प्रधानपञ्च बने । त्यसपछि पिताको बिँडो थाम्न आइपुगे उनी । ०३३ सालमा भारतबाट आइएस्सी उत्तीर्ण गरेर स्वदेश फर्किएपछि निर्विरोध प्रधानपञ्च चयन भए । पटक–पटक गरी ९ वर्ष गाउँपञ्चायत चलाए । ०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा गाविस अध्यक्ष बने । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा… विस्तृत समाचार
प्रदीप नेपाल, नेकपा नेता÷लेखक लामो राजनीतिक यात्रालाई विश्राम दिँदै हिजोआज प्रदीप नेपाल लेखकीय भूमिकामा सक्रिय छन् । ‘सञ्जय थापा’ नामबाट पार्टी कामसँगै थालेको लेखनयात्रा करिब–करिब पूर्णकालीन भएको छ । काठमाडौं, गोठाटारमा स्थापित मदन भण्डारी टेक्निकल स्कुलबाट प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा उनको सक्रियता छ । बसोबास पनि त्यतै । तीनचोटि क्याबिनेट मन्त्री भएका उनलाई अहिले पार्टीले कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन । केही समयअघि प्रदेश प्रमुखहरु फेरिँदा उनी… विस्तृत समाचार
– श्रीमाया थकाली, नेत्री (नेकपा) गुटबन्दीको चरम शिकार भएकी नेकपा नेत्री हुन्, श्रीमाया थकाली । म्याग्दी–मुस्ताङजस्तो जिल्लामा कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन पहल गरिन् । अखिलमै हुँदा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव लडेर १४ मतले पराजित भएकी थिइन् । बीचमा मुखियाको जागिर खाएर छाडिन् । ०५१ को मध्यावधिमा एमालेबाट टिकट त पाइन् तर हारिन् । ०५८ को राष्ट्रियसभा निर्वाचन जितिन्, ०६३ को पुनःस्थापित संसद् (अन्तरिम) मा पनि रहिन् ।… विस्तृत समाचार
विष्णुमाया ओझा, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग मकवानपुरकी विष्णुमाया ओझा राजनीतिक र सामाजिक अभियन्ता हुन् । ०७६ वैशाख ६ का दिन राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्य पदमा नियुक्त उनीसँगै पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी अध्यक्ष तोकिएका थिए । तर, शान्तराजले असन्तुष्टि जनाएर राजीनामा दिएका छन् । र, चार पदाधिकारी रिक्त छ । अनेरास्ववियु (पाँचौं) हुँदै ०३७ सालदेखि राजनीतिमा होमिएकी उनी ०३७ मा महिला अध्ययन दलको सचिव, ०३८ मा… विस्तृत समाचार
भूपेन्द्रजंग शाही, महासचिव, तरुण दल प्रदीप पौडेल नेविसंघ अध्यक्ष हुँदाका उपाध्यक्ष हुन्, भूपेन्द्रजंग शाही । दुईपटकसम्म कालिकोटबाट चुनाव उठे, हारे । त्यसपछि तरुण दलको महासचिव भएका उनको अहिले अध्यक्ष जितजंग बस्नेतसँग विवाद छ । जितजंगले उनलाई कारवाही गरे । उनले पनि जितजंगलाई बाँकी राखेनन् । ० तरुण दलको कार्यकाल दुई महिना बाँकी हँुदा किन विवाद बढेको ? – दुई हैन, एक महिनामात्र बाँकी हो ।… विस्तृत समाचार
शुकदेव भट्टराई (खत्री), पूर्वमहालेखा परीक्षक (कावा) सरकारी हिसाब–किताब जाँच्ने निकाय, अर्थात् महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा केही समय काम गरेका शुकदेव भट्टराई (खत्री) नेपालको कर मामिलाका विज्ञ मानिन्छन् । पछिल्लो समय एनसेलले पुँजिगत लाभकर तिर्नु नपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । एनसेलले पुँजिगत लाभकर तिर्नुपर्ने महालेखाको ५४ औं प्रतिवेदन उनकै कार्यकालमा तयार भएको हो । तर, अनेक बहानामा एनसेल यो प्रकरणलाई लम्ब्याउने प्रपञ्चमा लागेको… विस्तृत समाचार